Apartment kwi Darvina-ekhohlo ungqameko, kumbindi Grodno - I-Airbnb
Apartment kwi Darvina-ekhohlo ungqameko, kumbindi Grodno
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDarvina
Indlu enkulu kunye eqaqambileyo enamagumbi ama-2, ekwiziko elizolileyo lesixeko saseGrodno ngasemva kweBhulorho endala. Imbonakalo entle yeDolophu eNdala kunye neThiyetha yeDrama. Kufuphi nefulethi kukho indawo encinci yokujonga, indawo ezolileyo yokuhamba.
Ukuya kwiindawo eziphambili ngeenyawo 10-15 imizuzu. Ixhotyiswe ngayo yonke into efunekayo ukuze uhlale ukhululekile ngabantu aba-4. Kumgama wokuhamba weziseko eziphuhlisiweyo: iivenkile, iikhefi, iibhari, iindawo zokutyela.
Indlu enkulu kunye eqaqambileyo enamagumbi ama-2, ekwiziko elizolileyo laseGrodno, ngasemva kweBhulorho endala. Umbono omangalisayo weDolophu endala kunye neThiyetha yeDrama. Kukho indawo encinci yokujonga ecaleni kwendlu, indawo ezolileyo yokuhamba.
Eyona nto inomtsalane yimizuzu eyi-10-15 ngeenyawo. Ixhotyiswe ngayo yonke into efunekayo ukuze uhlale ukhululekile ngabantu aba-4. Ukuphuhliswa kweziseko ezingundoqo kumgama wokuhamba: iivenkile, iikhefi, iibhari, iindawo zokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- Darvina